January 2020 | OROMIYAA TIMES
Boordiin Filannoo Itiyoophiyaa lammummaa Itiyoopiyummaa obbo Jawaar Mahaamad guyyaa murtaa’e keessatti akka mirkanaa’u yeroo lammataaf Kongresii Federaalawaa Oromoof Xalayaa ege. OFKn gama isaan seera irratti hundaa’uun furmaata akka argatu goona jedhee jira.
በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ምላሽ ለማድረግ አንድ ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተመድ ገለጸ። እ.ኤ.አ በ2020 በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ምላሽ ለመስጠት እንዲያስችል የአንድ ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልግ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፣ የኢትዮጵያ መንግሥት እና አጋር አካላት ይፋ ማድረጋቸውን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱጄሪክ አስታወቁ፡፡ በኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ እቅድ ከተያዛላቸው 8 ነጥብ 4 ሚሊየን ሰዎች መካከል 7 ሚሊየን የሚሆኑት …
በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ምላሽ ለማድረግ አንድ ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተመድ ገለጸ Read More »
Author’s Note: The regular quinquennial (every 5 years) Ethiopian parliamentary elections generally held in May have been postponed to August 2020. The National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) explained it needed the extra time to complete the necessary groundwork to properly set up the election. That is prudent action by the NEBE given the complexity and …
Democracy, the End Game in Ethiopia: From EleKtions to Free and Fair Elections in 2020 (Part II)-ECAD FORUM Read More »
Qellem Wallaggaatti manni uummataa waraana mootummaan gubataa jira. Gabaasan guyyaa har’a Amajjii 29,2020 argadheen Qellem Wallaggaatti Manni uummataa qabeenya waliin guyyaa kaleessaa waraana mootummaan gubachuu naa eere. Haaluma kanaan godina Qellem wallaggaa aanaa Haawwaa Galaan ganda Tuulama Canqoo jedhamu keessatti kaleessa Amajjii 28, 2020 mana namoota armaan gadii qabeenya keessa jiru waliin barbadeessan. Isaanis:- 1.Nuuriyaa …
Qellem Wallaggaatti manni uummataa waraana mootummaan gubataa jira Read More »
Barattoonni Oromoo Yuunversiitii Jimmaarraa ari’aman nama 16 ga’aniiru. Isaan keessaa barataan 8 akka barnootatti deebi’uu hin dandeenyetti ari’aman. Maqaan barattoota 16 kunooti
Barattoonni Oromoo Yuunversiitii Jimmaarraa ari’aman nama 16 ga’aniiru. Isaan keessaa barataan 8 akka barnootatti deebi’uu hin dandeenyetti ari’aman. Maqaan barattoota 16 kunooti: Guutummaattii barnoota irra kan ari’ame 1. Amaanuel Bantii – Mechanical waggaa 5ffaa – dismissed 2. Dirribaa Araarsaa – Mechanical waggaa 4ffaa – dismissed 3. Huseen Abdulqaadir – material – wagga 5ffaa – dismissed …
Barattoonni Oromoo Yuunversiitii Jimmaarraa ari’aman nama 16 ga’aniiru. Isaan keessaa barataan 8 akka barnootatti deebi’uu hin dandeenyetti ari’aman. Maqaan barattoota 16 kunooti Read More »
Yuunibarsiitii Jimmaatti waraanni mootummaa barattoota uffata gaddaa uffatan reebaa jiru
Yuunibarsiitii Jimmaatti waraanni mootummaa barattoota uffata gaddaa uffatan reebaa jiru. “Mooraa tekinooloojii Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoonni haala kanan reebicha ulfaataaf saaxilamaa jiru” jechuun barattoonni dhaammatan! “Qalbeessaa Dhangi’aa”
Barataan Anuwaar Tasfaayee jedhamu Yunvarsiitii Diillaatti saaxinii uffataa keessatti fannifamee keessatti du’ee argamuu isaa yunvarsiitichi beeksiseera
Du’uu barataa Yuunvarsiitii Diillaa duuba iccitiin jiru maali? Anuwaar Tasfaayee barataa yuunvarsiitii Diillaatti du’ee argame. Barataan Anuwaar Tasfaayee jedhamu Yunvarsiitii Diillaatti saaxinii uffataa keessatti fannifamee keessatti du’ee argamuu isaa yunvarsiitichi beeksiseera. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Cooraa Qumbaabeetti dhalatee kan guddate Anuwaar Yunvarsiitii Diillaatti barataa waggaa 1ffaati jedhan maatiin isaa. Obbo Tasfaayee Wandimmuu abbaa barataa Anuwaaridha. …
Barataan Anuwaar Tasfaayee jedhamu Yunvarsiitii Diillaatti saaxinii uffataa keessatti fannifamee keessatti du’ee argamuu isaa yunvarsiitichi beeksiseera Read More »